Cage vy, mpanamboatra fefy tariby - Tian Yilong
Fampahalalana momba ny vokatra amin'ny antsipiriany Fitaovana: Fampiharana tariby nandrisika nidina: karazana penina sy fonosana: Galvanisé alohan'ny fanenomana (GBW) habe / lava tariby: 1 "/ 0.835mm endri-javatra: Mpanjifa antonony, antonony mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa: ekena maivana be: akoho mavesatra andraikitra tariby, mainty taona ...
Fitaovana famaritana amin'ny antsipiriany Fitaovana: Fampiharana an-tariby nandrisika nidina: Pens sy Enclousers Aperture: 1 ″ Wire Dia: 18gauge Width: 2ft, 3ft, 4ft Halavany: halalin'ny 100ft: 19cm Hazavana avo: tariby mifatotra annealed black, rojo mainty mifatotra rojo vy Coops Chicken Wire Net ...
Fitaovana famaritana amin'ny antsipiriany Fitaovana: Hot Wire Galvanized Hot, Wire vy tsy misy fangarony: 1inch, 25mm endri-javatra: antenaina ho an'ny fiainana antonony, orinasa fanamafisana lehibe vita: Eny natao ho an'ny mpanjifa: fampiharana ekena :: Fampidirana plastika, famolavolana ary hazavana avo lenta: tariby mifatotra annealed mainty, bl ...
Antsipirian'ny alika alika maoderina modely dia toeram-pambolena biby fiompy mora mivory. Azo atao amin'ny fomba namboarina io. Izy io dia natao indrindra ho an'ny alika, osy ary akoho lehibe. Izy io dia miaina, maharitra, mitahiry ary voangona mialoha ny tontonana. Famaritana ny anaran'ny vokatra efa voavory alika alika vita amin'ny alika vita amin'ny lokony Blac ...
Detail Modular Chain Link Dog Kennel dia vita amin'ny Metal Pipe sy Chain Link Steel. Izy io dia karazana fonosana ho an'ny biby fiompy mavesatra. Tena tsara ho an'ny biby lehibe ivelan'ny trano, afaka miaina, maharitra ary mitahiry. Cages biby, mpitatitra ary trano ho an'ny lalao an-kalamanjana biby. Fanondroana Product Product Mo ...
Antsipirian'ny alika alika maoderina modely dia toeram-pambolena biby fiompy mora mivory. Azo atao amin'ny fomba namboarina io. Izy io dia natao indrindra ho an'ny alika, osy ary akoho lehibe. Izy io dia miaina, maharitra, mitahiry ary voangona mialoha ny tontonana. Fifanarahana Muliple nivory, Dog cage set-up ao anatin'ny 30 minitra. Premium ...
Fitaovana famaritana amin'ny antsipiriany Fitaovana: Electric Wire Galvanized Wire: White, Wire Green Dia: 4.5mm Hole habe: 200mm X 55mm Teknika: Fampiharana fanamafisam-peo matihanina: Fefana mitokana ho an'ny zaridaina, Modely momba ny fonenana: Square Post, endrika endrika holatra, Fefy Post quadrate: App mahafinaritra ...
Fitaovana famaritana amin'ny antsipiriany Fitaovana: Coloire Wire electro galvanized: fotsy, maintso, tariby mavo Dia: 4.0mm Hole habe: 200mm X 65mm Teknika: Fampiharana fanamafisam-peo matihanina: Fefana mitokana ho an'ny zaridaina, maodely vita amin'ny arabe: Posta efajoro, Fehezin'ny fefy quadrate: tsara Fisehoana, matanjaka ...
Manana ekipa teknika matanjaka amin'ny indostria izahay, traikefa matihanina am-polony maro, haavo famolavolana tena tsara, mamorona fitaovana avo lenta avo lenta.
Ianao ve mitady fefy tariby mifono vy? Fantatrao ve fa manana safidy ianao? Misy karazany roa ny fitaovana fencing vita amin'ny tariby nohavaozina: GBW (nandrisika alohan'ny fanenomana / fanamafisam-peo) sy GAW (nandrisika taorian'ny fanenomana / fanamafisam-peo). Toa mitovy be ny fahitana azy ireo. Fa raha mijery akaiky kokoa ianao, ca ...
FOMBA FOMBA TELO HANAOMPOANA NY HEIREO MANOKANA / HEVAGONALIANA MAHAY MAHAIKA
1) Manampy tariby manamafy (tariby manamafy iray isaky ny 0,5m) Matetika ampio tariby manamafy iray amin'ny harato 1m sakany. Manampia tariby fanamafisana roa ao anaty harato 1.5m sakana Ampidiro tariby telo manamafy amin'ny velarana 2,0m FANAMARIHANA: Ny isa ny tariby manamafy dia azo ampiana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. 2) sisiny roa sosona Ataovy ny ...
Ireo horonan-taratasy dia alefa any amin'ny fonenan-kalitaon'ny dadatoako mba hosaronany manokana. Ity milina ity dia miavaka amin'ny famonoana vinyl ny karazana harato tariby rehetra, ao anatin'izany ny harato ampiasaina amin'ny fananganana vela-pandrika. Eto dia misy fonosana avo lenta sy matevina ary malefaka amin'ny UV voatsabo Black PVC mifamatotra mafy amin'ny harato tariby. Ny firakotra dia ...
Izahay, combo famokarana sy varotra, orinasam-pianakaviana miasa amina asa mitohy hatramin'ny 1990. Mamokatra sy manondrana vokatra faran'izay betsaka ny fifangaroan'ny tariby, ny harato tariby ary ny fefy ary zavatra mifandraika amin'izany izahay. Izahay dia loharanom-pahalalana azo antoka amin'ny filanao harato tariby rehetra. Ny fanjakàn'ny fitaovan'ny zavakanto, ny traikefa lehibe, ny fifehezana kalitao siantifika ary ny ekipa manolo-tena dia manome vahaolana feno harato tariby ho an'ny fampiharana manerantany.
Manolo-tena izahay hanome ny kalitao.
Izahay no loharano atokisanao.
Haavo ohatra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.